Lapho ingane egulayo emkhayeni, bonke ukunakwa abadala igxile ke. Iphuzu lapha akukhona ukuthi lokhu kuyisifo esingathí sina esingase noma umkhuhlane ne ukukhwehlela. Zonke kakhulu, eqinisweni, kukhwehlela ngokwawo uphawu lesi sifo futhi zidinga ukwelashwa.
Ukuze ulwe le nkinga eziningi athuthukile zezidakamizwa asebentisa tindlela letehlukene: amaphilisi, ukumiswa ukwakhiwa ngoba lapho ephefumula, ukukhwehlela isiraphu. "ACC" izingane athuthukile abakhiqizi eJalimane neSlovenia. Umsebenzi oyinhloko we izidakamizwa - trudnootdelimoy liquefaction ka isikhwehlela, lula ukususwa ipheshana lakhe zokuphefumula. "ACC" umphumela anti-inflammatory ngu ezivimbela amagciwane e isikhwehlela othuthukayo.
I yokusebenza isimiso 'ACC "
Ngokuba ukusebenza esitebeleni ngomzimba womuntu imvelo uye wahlela yonke into ngendlela njalo kukhicite uketshezi ekhethekile lwamafinyila, ezihlobene imisebenzi eyisisekelo umgudu zokuzivikela, zokuhlanza nezigcina umphumela elwa namagciwane. Uma umuntu egula, inqubo yokuthuthukisa amakhono le mfihlo isebenze ngokuphindaphindiwe. Ukungaguquguquki kule isikhwehlela has a viscosity lasetulu: ingane uhlushwa izikhathi eside ukukhwehlela, kokuziklinya, futhi isikhwehlela akusho nimuke. Lokhu ukukhwehlela libizwa engatheli.
Kuyinto ezimweni ezinjengalesi ukuze nisize umzimba wengane, ukhethe "ACC" izingane (isiraphu). Yokusetshenziswa iwukuba nika lona abantwana ukuba umntwana eseneminyaka emibili. viscosity isikhwehlela kuncike khona izibopho ekhethekile - amabhuloho disulphide. "ACC", ukuwela umzimba wengane, enza lezi zakhi, futhi ubangela ukudabuka kwabo. Isikhwehlela yayiya viscous, futhi inqubo kususwe yomoya lula kakhulu. Air mass ngokufaka bronchi, bayakwazi aluka ngokukhululekile, ngaphandle okubangela ukucasulwa ubala we eziyimpumelelo emsipheni. Kukhwehlela ithele.
"ACC" (izingane isiraphu) uyaqhubeka ekhuthele ngisho nalapho isikhwehlela ubovu ingxenye likhona. Ekuqaleni, abazali kungase kunikeze umuzwa ongadalwa ukukhwehlela. Nokho, ekuqiniseni inqubo umane athi izidakamizwa izenzo. Kancane kancane zasondela luphola ukukhwehlela reflex, ngokushesha ukhwehlela maqembu ngokuphelele.
I izakhiwo antioxidant we "ACC" Kuyinto engenzeka ukucindezela izinqubo wendawo ukuvuvukala ukuthi cishe negates amathuba lokubuya kwesifo kanye nezinkinga. Amasosha omzimba kungekho ukuchayeka izidakamizwa abuzange.
amafomu olungenzeka ukukhululwa
Abakhiqizi Ukuze kube lula futhi ububanzi bomnyango izidakamizwa ezihlongozwayo amafomu eyahlukene ukukhiqizwa. I elimbudumbudu egabheni wedwa buhlanjululwe ngamanzi, kuvela, "ACC" -sirop. Yokusetshenziswa izingane zingaqhubekela ziphathwe lo muthi, ngisho nalabo izingane abaye akukafiki umntwana eseneminyaka emibili. Nokho, odokotela angikwenzi nokuqokwa kwakhe izinsana ukwelapha ukukhwehlela kanye ukucinana kwemigudu yokuphefumula, ngenxa yokuthi yomoya ezinsaneni mincane kakhulu, futhi imisipha pectoral buthaka ngaphezulu. Ngenxa yalezi zizathu, ingane encane nje ngeke bakwazi ukukhwehlela ivolumu anda isikhwehlela. Uma kungekho okunye kule nomuthi cha, ukwelashwa nge "ACC" okufanele kwenzeke ngaphansi kokuqondisa udokotela ukuba khona.
Nokho, kufanele kuphawulwe ukuthi "ACC" (isiraphu) yokusetshenziswa izingane ezingaphansi konyaka owodwa ikuvumela ukwabela khona ingane cystic fibrosis (isifo ngofuzo libhekene nezinkinga umgudu wokuphefumula).
effervescent "ACC" amaphilisi kabanzi. Bona angathengwa ngemithamo ezintathu: 100, 200 kanye 600 mg acetylcysteine (isici esiyinhloko esebenzayo). A umthamo 600 mg yigama ukuhweba "ACC-Long", libhekene ithonya isikhathi eside futhi elibekelwe iziguli ezingaphansi kuka engu-14. Omunye ithebhulethi zomuthi, kanye yokutholwa, ubuyisela reception amaningi amazinga okukhishwa ezincane.
Nokumiswa okulungiselelwe diluting elimbudumbudu izikhwama (100, 200 mg) emanzini, itiye, ubisi noma isiphuzo sezithelo. Ukwakheka okuholela akufanele kube kushisa. Okungcono kakhulu, uma izinga lokushisa iseduze nezinga lokushisa komzimba.
With ukusetshenziswa "ACC" ingenza ngisho ephefumula. 2.1 ml isixazululo senzelwe umjovo (esetshenziswa ezimweni ezimbi kakhulu kakhulu esibhedlela ngaphansi kweso lwezokwelapha) ixubene isixazululo isotonic of sodium chloride futhi isetshenziswa isifutho ekhethekile noma nebulizers. izinqubo kungaba kwenziwe izikhathi 1-2 ngosuku. Inkambo yokwelashwa - kufikela kuzinsuku ezingu-10.
Izinkomba lapho ungakwazi babela le izidakamizwa abasakwazi ezibanzi. Ngokuqondene seziguli ezisencane, izilinganiso ekhethekile yakhelwe ngabo, lapho ebizwa ngegama "ACC 100". Imiyalelo izingane isiraphu (njengoba ifomu eliphezulu ekwelapheni ngisho izingane kanye nezingane iminyaka 2) ikuvumela ukuthi usebenzise at eziningi izifo umgudu wokuphefumula.
Ngokuvamile, "ACC" elibekelwe iziguli ukucinana kwemigudu yokuphefumula (yimaphi amafomu: okungamahlalakhona, acute, obstructive), i-pneumonia, tracheitis, bronholitami (ukuvuvukala aphansi ipheshana zokuphefumula),-cystic fibrosis. Sebenzisa nomuthi at bronhoekstazah (ukwandisa bronchus ubukhulu endaweni lapho udonga bronchial lilimele).
Futhi, umkhuba wokusebenzisa ukuqoka "ACC" ekwelapheni abezindaba otitis futhi sinusitis (acute, ifomu ezingamahlalakhona), kusukela izidakamizwa uyakwazi yini mncane kuphela isikhwehlela, kodwa ekuqongeleleni ubomvu, inkanuko excretion yayo emzimbeni.
"ACC" izingane (isiraphu) yokusetshenziswa unqabela iziguli ezine ukungabekezelelani ngakunye izingxenye izidakamizwa futhi kulabo abaphethwe isilonda esiswini kanye nezilonda duodenal (isigaba acute). Lezi izifo ukuthethelelwa kodwa ingase futhi aphendule isicelo "ACC". Ngakho-ke, iziguli lezi zinkinga kufanele anake inhlalakahle yabo.
Ngokuqapha okukhulu, "ACC" (isiraphu izingane) kufanele bafake iziguli nge esingamahlalakhona kwezinso futhi hepatic, kukhona izinkinga kanye nezindlala adrenal, isifuba somoya bronchial.
Njengoba izifo eziningi manje ngezicabha, ngisho nasezinganeni ezincane ingatholakala esidalwa yizilonda emathunjini sibe nezifo zesisu noma isifo sikashukela. Esikhathini isifo yokugcina, kumelwe sikhumbule ukuthi "ACC" has sucrose. Uma ingane ukuthi nginesifo phenylketonuria, ukwelapha ukukhwehlela Kufanele ukhethe "ACC", engafaki aspartame (Sweetener).
Contraindication ngoba "ACC Long" - engu-ingane eneminyaka engaphansi kwengu-14.
Izindlela Yokusebenzisa kanye Isikali
on isicelo "ACC 100" imiyalelo manual izingane isiraphu Kunconywa ukuthola lapho yobudala lesiguli - engu-2 kuya 5. Futhi, kungenzeka elimbudumbudu e sachets (ivolumu - 100 mg), okuyinto thatha izikhathi 2-3 emini. Enye - the zithutha ku isitsha for yokukhiqiza isiraphu edlalwe ukuthola 5 ml (1 Ketha) njengoba 2-3 izikhathi ngosuku ngemva kokudla.
Iziguli yobudala iqembu engu-6 kuya 14 wayekwenza isiqu esithi "ACC" 200 mg (elimbudumbudu e sachets) kabili emini noma akhe amabili (10 ml) isiraphu kabili ngosuku ngesikhathi sokudla.
Iziguli engaphezu kuka-14 umkhuba, wokuqoka "ACC" 2 wokulinganisa nezinkezo (10 mg) izikhathi 2-3 emini (noma ukusebenzisa "ACC Long").
Ngo futhi ezimweni ezimbi nakakhulu, evumela ukusetshenziswa "ACC" (isiraphu) yokusetshenziswa izingane ezingaphansi konyaka owodwa. Izibuyekezo lodokotela kulokhu sikhuluma izinhlelo zokuphefumula okwamanje ampofu nemisipha pectoral mafutha. Ingane encane kuyoba nzima ukukhwehlela isikhwehlela anda ivolumu.
Kuthiwa okungenhla kuchazwe ejwayelekile ukwelashwa lwemithi. Kwezinye izimo ezinzima, umthamo izidakamizwa kungase kushintshwe phezulu (noma wehlise, uma likhona kakhulu). Inkambo evamile yokwelashwa - kufikela kuzinsuku ezingu-7. Kuphela udokotela anganquma ukwandisa isikhathi sokwelashwa. Ngo amafomu ezingamahlalakhona Ukucinana kwemigudu yomoya emaphashini noma fibrosis cystic yokwelapha usebenzisa "ACC" ingahlala izinyanga eziningana. Parallel kule kukulandzelela unomphela umsebenzi isibindi, izinso, adrenal. Control imingcele futhi kuncike enzyme igazi.
Okungenzeka imiphumela engemihle
Imiphumela engemihle zomuthi "ACC" kuyinto ngempela ezingavamile. Abazali seziguli ezisencane uthi mayelana nokubonakala ikhanda, ukuthuthukiswa stomatitis ka tinnitus. Okuningi kancane njalo kukhona okuthile okungahambi kahle emzimbeni ekusebenzeni pheshana emathunjini, ezifana isicanucanu, ukuhlanza, ukukhishwa isisu.
Futhi phakathi kungenzeka ukuphelisa ituthuko engakalungi ku inqubo yokusebenzisa "ACC" izingane (isiraphu) yokusetshenziswa ngokuvumelana ingozi ukuncipha blood pressure, ukuthuthukiswa tachycardia (ukushaya kwenhliziyo okusheshayo), bronchospasm, urticaria ukubukeka.
Esimeni iyiphi ukusabela ezingezinhle ngesikhathi yokwelapha nge "ACC" ukuyeka ukuphuza umuthi namaphesenti ukunxusa saziso ukuze wezingane.
Overdosing izidakamizwa "ACC" kungenzeka kwezinye izimo. Ungamukela futhi ingane ngemithamo ibalwa i isiguli esingumuntu omdala, ukusetshenziswa kwezidakamizwa kule kuyihaba ka iziyalezo ezikhethekile udokotela wakho noma inqwaba yalo ( "ACC") emzimbeni, okuyinto kungenzeka Yiqiniso eside ukwelashwa ngaphandle zokuqapha efanele kwezimiso isibindi, izinso, igazi imingcele. Kunoma ikuphi, izimpendulo okungenzeka iziguli "ACC" (izingane - isiraphu) imfundo manual uchaza ngokwesiprofetho izenzo ezifana ukuwa wegazi izinkomba, isicanucanu, ukuhlanza, umuzwa wokuthanda ukoma emlonyeni. Kukhona amathuba okuvela dermatitis nomzimba, ephelezelwa ukuqubuka futhi pruritus angagcina bronchospasm.
Ezimweni ezinzima kakhulu, odokotela bathi mayelana nokwenzeka angioedema futhi ukushaqeka.
Lonke ulwazi mayelana kungenzeka izidakamizwa ekuhlanganyeleni yakhiwa ngokuba "ACC" (isiraphu) yokusetshenziswa. Ezinganeni kungaba ngonyaka ukuthatha e kuphela ezimweni ezimbi nakakhulu futhi ngaphansi kokuqondisa udokotela. Nakuba isicelo parallel we "ACC" namanje into kunobungozi ngoba iziguli zanoma iyiphi iminyaka.
Kukhona ulwazi mayelana ukungavumelani "ACC" isakhi esiyinhloko esebenzayo nge penicillins semi zokwenziwa, cephalosporins, aminoglycosides. Kunalokho, akukho ulwazi mayelana acetylcysteine ukungavumelani ne izidakamizwa elwa namagciwane ezifana "Amoxicillin", "Erythromycin" futhi "Cefuroxime."
Njengoba kushiwo ngaphambili, ukwelapha iziguli ezineminyaka engu-2 kuya ku 5 ngokuvamile odokotela uthanda izidakamizwa "ACC 100" (isiraphu). Yokusetshenziswa izingane, odokotela izingane langempela ukuxwayisa abazali mayelana inadmissibility co-isimiso sokuqondisa 'ACC "futhi iyiphi imithi ukukhwehlela. Nge edilini enjalo okucishe kufane nalokhu "ACC" liquefies phlegm futhi antitussives ukucindezela reflex ukukhwehlela, isikhwehlela expectorated cha. Igcwele yokujama tsi ka phlegm, okuyinto esabisa kakhulu impilo futhi ngezinye izikhathi impilo yengane.
Odokotela bezingane zimise "ACC" nge ejenti elwa namagciwane, lapho kungenzeka ukuthi awahambisani. ezimbalwa kuphela izinhlobo tetracycline imithi elwa namagciwane nge-penicillin akuzange futhi cephalosporin uchungechunge lingasetshenziswa kanye "ACC" ngezikhawu okungenani amahora ama-2 phakathi Ukweqiwa.
Ngokuzimela ukukhulisa elimbudumbudu futhi izimpushana "ACC" kuyamukeleka kuphela gilazi tsha. Kunconywa ukuba sizigweme irabha noma insimbi.
Ekwelapheni usebenzisa "ACC" iyadingeka ukwandisa inani loketshezi yokuqothulwa. Lokhu kuzokwenza kakhulu ukuthuthukisa umphumela izidakamizwa mucolytic. Izingane kufanele athathe "ACC" amahora kungakadluli 4 ngaphambi sokulala.
Ngokubona abathengi ngemithi
Abazali iziguli weneliseka izidakamizwa, "ACC" (isiraphu). Yokusetshenziswa izingane (izibuyekezo umthengi ukuqinisekisa leli qiniso) kunikeza egqame bha indlela yokuphathwa, umthamo. Khwehlela ezinganeni ngokuvamile ngokushesha bakhiqiza futhi 3-4 ngosuku sihamba. E. Ngokuphumelelayo kusho cishe 100% isicelo.
I isiraphu has a emnandi orange ukunambitheka, ngakho ngisho ezingezwakali eziningi zeziguli akudingeki wenze isikhathi eside ukuthatha imithi. Ngaphezu kwalokho, izindleko "ACC" iyatholakala anhlobonhlobo abathengi nge amazinga ehlukene kakhulu ikhono zezimali. Kusho elula kakhulu isitoreji, akukho enkingeni ukulithatha endleleni.
I "ACC" Yiqiniso, zikhona Izimo ezithile kanye nemiphumela engemihle, kodwa sebenzisa kuphela ngenjongo udokotela ukuba khona futhi ukuhambisana nayo yonke izincomo Uyoqeda nemiphumela ebuhlungu kakhulu futhi ukubonakaliswa.
Lo mntwana uyoba ukudonsa umoya nokuzola, nabazali ngeke ngempilo yakhe.
Kusukela lokho amaphilisi "paracetamol". Zonke izidakamizwa "paracetamol"
Isibindi Ngokucophelela e ukhilimu omuncu kanye no-anyanisi
Yini okufanele ukubingelela umama emshadweni bendodana yakhe na?
CT we umphimbo: Izibuyekezo intengo. I-CT scan entanyeni nomphimbo ezibonisa?